Umbutho we-Element - I-Charity Youth Growing
Singabantu abatsha-nzuzo bentando esekelwe eSheffield, ukuhambisa intuthuko, izenzo zentlalo kunye neenkqubo zoshishino kubantu abatsha nabantu abadala abasengozini. Sijonge ukuxhobisa abantu abatsha ukuba benze utshintsho oluhle kuluntu lwabo, baphakamise iimfuno zabo kwaye babe ngumzekelo kubo.
Ngaba uneminyaka eyi-15 - 17 kwaye ujonge ukufumana uninzi lwakho ehlobo?
Joyina i-NCS ngamava amaninzi! Ukudibanisa nabantu abatsha, benze abahlobo abahlala ubomi kwaye bafumane izakhono ezintsha kwiCV yakho.
Fumana okunye malunga ne-NCS
Funda ngamanye amava amava
Ngaba unayo unyana okanye intombi, okanye unomdla umntu omncinci?
Fumana indlela inkqubo ye-2019 NCS yokwenza ngayo ihlobo kunye nekhono lobuchule abayiyi kulibala.
I-FAQ malunga namava
Iindleko ezingaphantsi kunokuba ungacinga
Zikolo no o titshala
Ngaba ungumntu osebenza kunye nabantu abaselula?
Fumana indlela inkqubo ye-NCS ingawazisa ngayo amava amatsha, ukuphuhlisa izakhono ezintsha kwaye wenze abahlobo abatsha, ubomi obude.
Ulwazi olungakumbi ngathi
Izithuba ezingapheliyo zonyaka
Sineenkolelo eziphambili ze-3
Ngenkxaso kunye nokholo lwenu, abantu abatsha banokufezekisa ukungakholeki
Njengobubele bentsha esiyazi ukuba unikwe izixhobo ezifanelekileyo, indawo kunye nenkxaso, into engakholwanga iyafumaneka.
Eminye imizekelo yabantu abatsha abaphumelelekanga kwi-Element Society kubandakanya: ukutshatyalaliswa kweengxowa, ukuhweba kwiindawo zokuthengisa, ukucwangcisa nokuqhuba ii-worksshops, ukuxhatshazwa nokuxhatshazwa ngokobuhlanga, ukuhlangabezana nokufikelela okukhubazekileyo kunye nokunye okuninzi. Yintoni eyakubetha ngayo kukuba le milayezo ayiyiyo nje ngokuphumelela kwendabuko "kodwa iphela ngabantu bonke.
Ukubonelela abantu abatsha abanamandla okwenene ukuthatha isenzo esihle kwiindawo zabo
Sisoloko siqalise iiprojekthi ezintsha ukuphucula yonke imiba yoluntu. Abantu abatsha basentliziyweni yazo zonke iinkqubela zethu ezintsha njengentando yolutsha.
Ezinye zeeprojekthi zethu zenziwe ngabantu abatsha baseSheffield kunye ne-South Yorkshire. Emininzi yeeprojekthi zethu zinabantu abatsha abaqhubela phambili kubathathi-nxaxheba ukuya kwimisebenzi ehlawulwayo. Zonke iiprojekthi zethu zinabantu abancinci abandakanyekayo kuwo onke amanqanaba-ukusuka kwimbono kunye nokuyila, ukuhanjiswa nokuvavanya.
Ukukhuthaza abantu abatsha ukuba babe ngumzekelo onobuhle kulabo bajikelezayo
Ukuqaphela ukuba abahlobo beentlobo zontanga zinempahla enamandla ekuphuhliseni abanye abantu abaselula kubalulekile kwiindlela ezininzi.
Ngaloo ndlela sinikezela ithuba kunye nethuba lokufaka inxaxheba kwintando kwiindima apho zingaba ziimodeli ezintle. Oku kubandakanya ukuba ilungu leBhodi yethu yoLutsha elenza isicwangciso sentlangano kunye nolwalathiso lweeprojekthi zethu. Le ngenye yezindlela ezininzi esilungiselela imilinganiselo yokusebenza ngokusemgangathweni njengentando yolutsha.
Ukuba ubelana ngombono wethu kunye nesifiso esingenammiselo sokwenza impembelelo enhle kwihlabathi, nceda ungene kumnxeba. Sitshele ngeengcinga zakho kunye namava akho, nokuba ufuna ukusebenzisana nathi kwinto oyenzayo, okanye kuthi kuthile into esenzayo.
Sitsho - 0114 2999 210
I-imeyile yethu hello@elementsociety.co.uk
Abalingani kunye nabaxhasi baquka:
EFL TRUST // NCS TRUST // ISEBE LEENKONZO // SHEFFIELD FUTURES // IBOTOTY BIG // KUPHELA // SHEFFIELD HALLAM // UNIVERSITY OF SHEFFIELD